3 Umthandazo wokucela inkwenkwe ukuba ibuye iguqukile kwaye kwangoko
kuqala » Imithandazo » Umthandazo wokuba isoka libuye liguqukile
Uthando luhlala lunzima kakhulu, ngakumbi xa amadoda ethatha isigqibo sokusishiya. Ngoko ke alikho ixesha lokufunda a umthandazo wokuba isoka libuye uxolo.
Sazi kakuhle ukuba ubudlelwane namhlanje alusafani nakuqala. Amadoda aphela nabafazi ngayo nantoni na kwaye ngamanye amaxesha batshintshiselane ngentombazana abangayaziyo.
Ukuba oku kwenzekile kuwe kwaye ukuba ubandezelekile ngokwenene, sinemithandazo emi-3 eyomeleleyo yokusombulula imeko yakho. Bajonge ukufumana isoka okanye owayesakuba ngumyeni/umyeni ukuba abuyele kuwe.
Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuthandaza kwaye ukhanyise amakhandlela abomvu ekugqibeleni, kodwa siya kukucacisa konke oko kanye emva kwemithandazo.
1) Umthandazo wokuba isoka libuye liguqukile
Umthandazo wokuqala esiza kuwubeka apha ilungiselelwe iRed Rose Gypsy. Le gypsy yabandezeleka kakhulu esaphila kwaye ayizange ibe nolonwabo kubomi bayo bothando.
Oku kwamenza waziwa waza wanqulwa ngokwenene ngabantu.
Kwezi ntsuku kuthethwa amawaka emithandazo yonke imihla, phantse yonke inxulumene neengxaki zothando. Ke, uliqumrhu elichanekileyo lokubuyisela isoka lakho ezingalweni zakho.
Ndibongoza onke amandla kunye namandla eRed Rose Gypsy ukuze andincede kwangoko kubomi bam bothando.
Ndicela yonke imikhosi yale ndalo kunye nale gypsy ukuba isoka lam libuyele kum uxolo kakhulu kwaye ngokukhawuleza.
Ndifuna (igama lomfana) ukuba acinge ngam ngoku kwaye ndizisole ngokushiya ubomi bam.
I-Red Rose Gypsy iya kumenza akukhumbule, menze azisole kwaye amenze abuye kwangoko!
Amandla e-gypsy aya kungena ebomini (igama lakhe) kwaye akayi kumvumela ukuba acinge nantoni na ngaphandle kwam kunye nobudlelwane bethu.
Ndicela lo gypsy osokole kangaka, ndicela lo gypsy unceda abawudingayo, ndicela le gypsy ingummangaliso!
Buyisa (igama lakhe) ngoku, uxolo, ukukhala nokufuna ukubuyisela!
2) Umthandazo omfutshane wokuba isoka libuye ngokukhawuleza
Asinguye wonke umntu onomonde okanye ixesha lokuthandaza imithandazo emide. Sikhumbula oku, sigqibe kwelokuba sipapashe inguqulelo emfutshane yalo mthandazo ungasentla.
Inezicelo ezifanayo nomthandazo wokuqala wokuba isoka libuye uxolo kwaye iyafana into efanayo, kodwa imfutshane nje.
Ukuba unokholo alunamsebenzi nobungakanani, buya kusebenza nakanjani na ngaphandle kweengxaki.
Ndithandaza kwiGypsy Rose Red ndimcela ukuba angenelele kubomi bam bothando (igama lendoda) ecela, ekubandezelekeni, ukuba ambuyisele ebomini bam.
Ndilayita lomthandazo wam kunye nesi sicelo sam ngeli khandlela ukuze lo gypsy andifumane andincede eluthandweni.
Ndicela uncedo lwakho Gypsy, ndicela ukungenelela kwakho kunye nomlingo wakho kubudlelwane bam! Ndithembele kumandla akho eGypsy endiyithandayo, ndithembele kuncedo lwakho nakwimimangaliso yakho.
3) Umthandazo wokuba isoka langaphambili libuye ngokungxamisekileyo
Ngaba indoda ekushiyileyo ikhe yafuna ukohlukana kwaye ngoku ingumfana owayesakuba ngumyeni okanye ngumyeni? Ezi meko zintsonkothile ngakumbi, kodwa akwenzeki ukuzisombulula.
Kuya kufuneka sithandaze kwiiNgelosi ezintathu uGabriyeli, uRafael noMikayeli, ebacela ubabalo olunxulumene nothando.
Kufuneka sicele ukuba yonke into ilunge kwaye yonke into ibuyele esiqhelweni kobu budlelwane. Masithandaze ngokholo olukhulu kwaye sihlala sikholelwa ukuba yonke into izolunga.
Kwangathi ukungenelela kwe-3 Archangels enamandla uMichael, uGabriel noRafael bangena ebomini bam kunye nobomi (igama lendoda) ukudibanisa uthando lwethu, njengoko kufanelekile.
Uthando lwam nowayesakuba ngumyeni/nomyeni wam loyisa ubunzima.
Isiya iba worse sade sohlukana. Kodwa ndiyazi ukuba ayilunganga le nto, iyasisokolisa kwaye le kufuneka iphele.
Yiyo loo nto ndifuna ezi zithunywa zezulu zintathu zinenceba ukuba zindincede ndifezekise ubabalo eluthandweni kwaye zindincede ndilubuyise ngokukhawuleza, ngakumbi nanamhlanje!
Ndiyazi ukuba ndiyathandaza kwabanamandla, abanenceba, kunye nabo bathanda ukunceda.
Yiyo ke loo nto ndinyule izithunywa zezulu ezithathu, kuba ndithembele kuzo, ndinokholo olukhulu kuwo onke amandla azo.
Yenza lo mnikelo ngemithandazo
Njengoko usenokuba uye waphawula, ekuqaleni kwenqaku siye sakhankanya ukuba imithandazo ifuna idini. akanyanzelekanga, kodwa iyacetyiswa kwiziphumo ezikhawulezayo.
Konke okufuneka ukwenze kukukhanyisa ikhandlela elimhlophe okanye elibomvu kwaye uliphakamise ngaphezu kwenqanaba lentloko yakho ngaphambi kokuba uthandaze umthandazo oqinileyo wokuba isoka lakho okanye isoka lakho langaphambili libuye liguqukile.
Yiphakamise ngezandla zombini uze uthethe oku kulandelayo “Ndinikezela ngeli khandlela kwiRed Rose Gypsy ukuze ikwazi ukuzalisekisa isicelo sam esinxulumene nothando!" kwenye indawo "Ndinikela eli khandlela kwiiNgelosi ezintathu uMichael, uGabriel kunye noRafael ukuze bandincede ndifezekise ubabalo lwam!".
Emva koko, beka ikhandlela phambi kwakho kwisosi kwaye uqale ukuthandaza ngokholo olukhulu.
Kufuneka ushiye ikhandlela ngaphakathi endlini de ligqibe ukutshisa. Ngamaxesha ngamaxesha, unokuya kumda wekhandlela kwaye uthethe imithandazo kaninzi njengoko uthanda.
Ngaba ndingathandaza ngaphezu komthandazo omnye?
Usenokuba uqaphele ukuba sikhankanye imithandazo emithathu eyahlukeneyo apha ngasentla. Sisoloko sinikela ngaphezu kwesinye kuba kukho abantu abangafumani ziphumo ngemithandazo ethile.
Kule meko, sinokuthi unokwenza yaye ufanele uthandaze ngaphezu komthandazo omnye.
Sicebisa ukuba uthandaze imithandazo emi-3 kweli nqaku, ngaloo ndlela uya kufumana lonke uncedo oludingayo lokuzisa loo mntu ezingalweni zakho kube kanye.
Ungalibali ukwenza iminikelo ngokwahlukeneyo kuyo yonke imithandazo, nokuba uyithetha kwangolo suku olunye.
thandaza ku Umthandazo kaSt Cyprian wokubuyisela umntu
Nandipha umthandazo wokuba akuthande, abe nekhwele
gqiba nge umthandazele ukuba akukhalele
Yenza uninzi lwawo onke amandla omthandazo ukuba isoka lakho langaphambili libuye liguquke kwaye likhethwa ngoko nangoko.
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba ukholo sisiseko sayo yonke imithandazo. Ke, bathandaze rhoqo ukholelwa ukuba lo mntu uza kubuyela ebomini bakho.
Uya kubona ukuba kwiintsuku ezimbalwa uya kuba nazo zonke iziphumo ezifunwayo.
1 1) Umthandazo wokuba isoka libuye liguqukile
2 2) Umthandazo omfutshane wokuba isoka libuye ngokukhawuleza
3 3) Umthandazo wokuba isoka langaphambili libuye ngokungxamisekileyo
3.1 Yenza lo mnikelo ngemithandazo
3.2 Ngaba ndingathandaza ngaphezu komthandazo omnye?